မိန်း ကလေးတွေက အရမ်း ချစ်သွားမိ ရင် ကိုယ့်သွေးသားရင်းလိုပဲခံစားရတာ…. – Shwe Yoe
မိန်း ကလေးတွေက အရမ်း ချစ်သွားမိ ရင် ကိုယ့်သွေးသားရင်းလိုပဲခံစားရတာ….
Shwe Dragon | December 16, 2019 | Knowledge | No Comments
မိန်းကလေးတွေဟာ မွေးရာပါမိခင်စိတ်ရှိသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ စိတ်နှလုံးနူးညံ့တယ်၊ သနားလွယ်တယ်၊ အနစ်နာခံတတ်တယ်။ ဒီလိုမိန်းကလေးတွေဟာ ချစ်မိပြီဆိုရင် သူမတူအောင်ကို ချစ်နိုင်ကြပါတယ်။ ချစ်သူအတွက် ချစ်သူအဖြစ်သာမက မိခင်တစ်ယောက်နီးပါးကို ဂရုစိုက်နိုင်တဲ့၊ ချစ်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေသူပါ။ ဒါကြောင့် သင့်ချစ်သူသာ ဒီလိုမိန်းကလေးဖြစ်နေခဲ့ရင် သင်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကံအကောငး်ဆုံးလူတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိထားလိုက်ပါနော်။
မိခင်တစ်ယောက်နီးပါးချစ်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ သင့်ကို ခဏခဏဖုန်းဆက်တယ်၊ အဆက်အသွယ် လုံးဝအပြတ်မခံဘူး၊ အမြဲတမ်း စိတ်ပူပေးတယ်၊ အဝေးရောက်နေတာတောင် သင့်ကို အမြဲတမ်း ဆက်သွယ်ပြီး ခဏခဏ သတငး်မေးတတ်တဲ့သူပါ။ သင်ဖုန်းမကိုင်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေ၊ သတင်းမပို့တဲ့ အချိန်တွေကျရင် အရူးတစ်ယောက်လို စိတ်သောကရောက်နေတတ်တဲ့ သူပါ။ အကြောင်းကတော့ သင့် တစ်ခုခုများဖြစ်သွားမလား၊ ဒဏ်ရာအနာတရများ ဖြစ်သွားမလား ဆိုပြီး အမြဲတမ်း စိတ်ပူပေးတတ်တဲ့ မိခင်စိတ်ရှိတဲ့ ချစ်သူမျိုးဖြစ်နေလို့ပါ။
သင့်ချစ်သူနားမှာ ရှိနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ သင်ဟာ နွေးထွေးမှုကိုခံစားရမှာပါ။ သင့်ကို ပွစိပွစိပြောပြီး ဆုံးမတတ်တယ်၊ တစ်ခါတလေ သင့်ရဲ့ ဝေယျာဝိစ္စတွေကိုတောင် ကူလုပ်ပေးတယ်၊ သင့်အတွက် အပင်ပန်းခံပြီး ချက်ပြုတ်ပေးတယ်၊ စေတနာနဲ့ အရာရာကို လုပ်ပေးတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုးဟာ သင့်ကို မိခင်တစ်ယောက်နီးပါး ချစ်နိုင်တဲ့ချစ်သူဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကို လုပ်ပေးနေတာတွေကလည်း သူအားနေလို့မဟုတ်ဘဲ သင့်ကိုအရမး်ချစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်၊ ဝမ်းနည်းတဲ့အချိန်တွေနဲ့ စိတ်ထိခိုက်စရာတစ်ခုခုရှိတဲ့အချိန်တွေမှာ သင့်ကို ဂရုစိုက်ပေးတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးပါ။ သင့်ရဲ့ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်၊ အဝတ်အစားကအစ အမြဲတမ်းဂရုတစိုက်နဲ့ အသေးစိတ်နိုင်လွန်းတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးပါ။ သင့်မွေးနေ့၊ နှစ်ပတ်လည်နေ့လို နေ့ထူးနေ့မြတ်မျိုးကို မမေ့မလျော့နဲ့ ဂရုတစိုက် အစီအစဉ်ဆွဲထားတတ်သူလညး်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ကို အရမး်ချစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုအကျင့်တွေကို သညး်မခံနိုင်လို့ စုံတွဲတော်တော်များများက ပြတ်စဲကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ချစ်သူဟာ သင့်ရဲ့ မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုလည်းသိတယ်၊ အားနညး်ချက်တွေကိုလညး် သိတယ်၊ ဒါတောင်သင့်လက်ကိုမလွှတ်ဘဲ ဆုပ်ကိုင်ထားတယ်ဆိုတာက သင့်ကို မိခင်တစ်ယောက်နီးပါးချစ်နိုင်တဲ့သူ ဖြစ်လို့ပါ။
သင့်ကို မိခင်တစ်ယောက်နီးပါး ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ သူ့ဘဝမှာ ဘယ်အရာကို အလိုချင်ဆုံးလဲလို့မေးရင် သင်နဲ့ အတူတူ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဘဝလေးကို တောင်းမယ့်မိန်းကလေးမျိုးပါ။ သူ့ရဲ့ဘဝမှာ အခြားအရာတွေအားလုံးထက် သင့်ကို ပိုလိုချင်တယ်၊ တစ်လောကလုံးနဲ့သင်တစ်ယောက်တညး်ကိုတောင် လဲနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးပါ။ ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးဟာ တော်တော်ကိုရှားပါးတဲ့အတွက် သင့်ချစ်သူသာ ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင် သူ့ကို တန်ဖိုးထားပါ။
မက်ဆီရဲ့ စံချိန်ကို မီဖို့ နီးစပ်နေတဲ့ မိုဟာမက်ဆာလာ
ဆံပင်ကောက် လိုက် ဖြောင့် လိုက် လုပ် တာများပီး ဆံပင် ပျက်စီးနေသူများအတွက် နည်းလမ်းကောင်း